खुशीको खबर ! अब कतार प्रहरीमा कतारमा रहेका नेपालीलाई लैजाने !:: Mero Desh
Published on: २१ आश्विन २०७८, बिहीबार १३:०६
काठमाडौं : कतार प्रहरीका लागि बहू चर्चित मागपत्र प्रमाणीक रण शुरु भएर पनि काठमाडौं को एउटा मेनपावरले ल्याएको डिमान्ड रद्द समेत भैसकेको छ ।यदि तपाइ कतारमा हुनुहुन्छ र कतार प्रहरीमा भर्ना हुन चाहनुहुन्छ भने यो खबर सुनेर तपाइको लागि यो समाचार सुखद हुन सक्छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ले कतारको दोहास्थित नेपाली दूतावासलाई मागपत्रप्रमाणीकरणको अनु मति पाइसकेको राजधानीको लाजिम्पाटस्थित अल ता,,क्वेत ओभरसिज नेपाल प्रा.लि. बाट पेश भएको उक्त माग पत्र प्रमाणीकरण गरेको भएको र ढिलासु स्तीको कारण कतार सरकारले रद्द गरिसकेको छ ।
एक मेनपावर कम्पनीले छनौट गरेको २ सय जना समेत कतार प्रहरीले अलिने बताइ सके को छ यस्तो अवस्थामा कतारले कतारमै रहेका नेपालीलाई प्रहरीमा लैजाने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
कतार सरकारको नजरमा प्रहरीको लागि नेपाली मेनपावर नै आवश्यक रहेको र त्यस्तै किसिमको बिश्वास रहेकाले कतारले नेपाली नै प्रहरीमा भर्नाको योजना बनाएको थियो । त्यस्तोमा मेनपावरले नेपालबाट प्रहरीको लागि भर्ना गर्न नसकेको अव स्थामा कतारमै रहेका नेपालीबाट प्रहरीमा भर्ना गर्ने सम्भावना बढी रहेको जानकार बताउछन।
कतार प्रहरीको लागि कतार सरकारले कतारमै कुनै एजेन्सी तथा मेनपावर कम्पनीलाई कतार बाट नै कतार प्रहरीको लागि छनौट गर्ने जिम्मा दिनसक्ने बताइदै आएको छ। कतरमा रहे का नेपाली वा भिजिट भिसामा गएका नेपालीहरु लाई कतार प्रहरीको लाही लगिने सम्भावना अधिक रहेको समेत बताउदै आएको छ ।
गरेका मेनपावर कम्पनी संग समन्वय गरेर बाकी प्रोसेसको बारेमा बुझेर कतार प्रहरीमा जान सकिने ठाउँ भने जिवितै रहे को जानकार बता उछन् ।
त्यसकारण कुनै पनि निर्णयमा पुग्न सबै कुरा बुझेर मात्रै प्रक्रि या सुरु गर्न हुन र सम्बन्धित मेनपावर कम्पनी र निकायमा मात्रै सम्पर्क गर्न अनुरोध समेत गर्दछौ ।